Uchenjeri hwaMwari—Jehovha Mwari Ndiye “Akachenjera Oga” | Swedera Pedyo
1, 2. Ndechipi chakanga chiri chinangwa chaJehovha nokuda kwezuva rechinomwe, uye uchenjeri hwaMwari hwakaedzwa sei pakutanga kwezuva iri?
VAPARADZWA! Vanhu, mbiri yokupedzisira yezuva rechitanhatu rokusika, kamwe kamwe vakawa kubva pamusorosoro kuenda pakadereresa. Jehovha akanga azivisa kuti “zvose zvaakaita,” kubatanidza vanhu, “zvakanaka kwazvo.” (Genesi 1:31) Asi pakutanga kwezuva rechinomwe, Adhamu naEvha vakasarudza kutevera Satani mukupandukira. Vakawira muchivi, kusakwana, uye rufu.
2 Zvingave zvakaratidza sokuti chinangwa chaJehovha nokuda kwezuva rechinomwe chakanga chakundikana zvisina tariro. Zuva iroro, kungofanana nematanhatu akaritangira, raizova rakareba zviuru zvemakore. Jehovha akanga arizivisa kuva dzvene, uye muzuva iroro pasi rose raizoitwa kuti rive paradhiso yakazara nemhuri yakakwana yevanhu. (Genesi 1:28; 2:3) Asi pashure pokupandukira kune ngozi ikoko, chinhu chakadaro chaizoitika sei? Mwari aizoitei? Pano ndipo pakava nomuedzo mukuru wouchenjeri hwaJehovha—zvimwe muedzo wakaomesesa.
3, 4. (a) Nei kupindura kwaJehovha kupandukira kwomuEdheni uri muenzaniso unoshamisa wouchenjeri hwake? (b) Kuzvininipisa kunofanira kutiita kuti tirambe tichiyeuka chokwadi chipi sezvatinodzidza pamusoro pouchenjeri hwaJehovha?
3 Jehovha akabva angopindura ipapo. Akazivisa mutongo wemhandu muEdheni, uye panguva imwe chete, akapa mashoko okuzivisa muchidimbu chimwe chinhu chinoshamisa: chinangwa chake chokugadzirisa zvisakarurama zvavaive vabva kutanga. (Genesi 3:15) Chinangwa chaJehovha chinoona zviri mberi chinotangira muEdheni chichipinda nomuzviuru zvemakore zvenhoroondo yomunhu zvichienda mberi, kusvika kure munguva yemberi. Chiri nyore kwazvo asi chakadzama zvokuti muverengi weBhaibheri angapedza upenyu hwake hwose hwakakomborerwa achidzidza nokufungisisa nezvacho. Uyezve, chinangwa chaJehovha chine chokwadi chaizvo chokubudirira. Chichagumisa uipi hwose, chivi uye rufu. Chichasvitsa vanhu vakatendeka kukukwana zvakare. Zvose izvi zvichaitika zuva rechinomwe risati rapera, kuitira kuti, pasinei nezvose, Jehovha achave azadzika chinangwa chake nokuda kwepasi nevanhu panguva chaiyo!
4 Uchenjeri hwakadaro hunoshamisa, handizvo here? Muapostora Pauro akanzwa kuda kunyora kuti, ‘Haiwa ukuru hwouchenjeri hwaMwari!’ (VaRoma 11:33) Sezvatinodzidza zvinhu zvakasiyana-siyana zvounhu hwaMwari uhu, kuzvininipisa kunofanira kutiita kuti tirambe tichiyeuka chokwadi chinokosha—kuti, nokuedzesesa, tinongokwara pamusoro pouchenjeri hwakadzika hwaJehovha. (Jobho 26:14) Kutanga ngatimborondedzera unhu hunoshamisa uhu.
Uchenjeri hwaMwari Chii?
5, 6. Zivo nouchenjeri zvinofambidzana pakudini, uye zivo yaJehovha yakakura sei?
5 Uchenjeri hauna kufanana nezivo. Kombiyuta dzinogona kuchengeta zivo yakawanda chaizvo, asi zvakaoma kufungidzira mumwe munhu achiti michina yakadaro yakachenjera. Kunyange zvakadaro, zivo nouchenjeri zvinofambidzana. (Zvirevo 10:14) Somuenzaniso, kudai waida zano rouchenjeri pakurapa chinetso choutano chakakomba, waizobvunza mumwe munhu ane ruzivo rushomanana kana kuti asina ruzivo rwokurapa here? Nyangwe! Naizvozvo zivo yakarurama inokosha nokuda kwouchenjeri hwechokwadi.
6 Jehovha ane dura risina mugumo rezivo. Zvaari “Mambo asingagumi,” iye bedzi ndiye ave achirarama nokusingaperi. (Zvakazarurwa 15:3) Uye kwemakore asingaverengeki iwayo, ave achiziva zvose. Bhaibheri rinoti: “Hapana chisikwa chaasingaoni, asi zvinhu zvose zvakafukuka uye zviri pachena mumaziso ake iye watinozvidavirira kwaari.” (VaHebheru 4:13; Zvirevo 15:3) SoMusiki, Jehovha anonzwisisa zvizere zvaakaita, uye akaona mabasa ose evanhu kubva pakutanga. Anoongorora mwoyo womunhu mumwe nomumwe, asina chaanoshayiwa. (1 Makoronike 28:9) Sezvo akatisika tichigona kuzvisarudzira, anofara paanoona kuti tiri kuita zvisarudzo zvokuchenjera muupenyu. Sezvo ari “Wokunzwa munyengetero,” anoteerera minyengetero yakawanda panguva imwe! (Pisarema 65:2) Uye sezviri pachena Jehovha ane ndangariro yakakwana.
7, 8. Jehovha anoratidza sei kunzwisisa, njere nouchenjeri?
7 Jehovha haana zivo chete. Anoona kuwirirana kunoita pfungwa dzakasiyana uye anonzwisisa zvizere zvose zvinoumbwa nemashoko akazara akawanda. Anoongorora nokutonga, achisiyanisa zvakanaka nezvakaipa, zvinokosha nezvisingakoshi. Uyezve haangotarisi zviri pamusoro chete uye anotarisa kusvika mumwoyo chaimo. (1 Samueri 16:7) Nokudaro, Jehovha ane kunzwisisa nenjere, izvo zvinopfuura zivo. Asi uchenjeri hunotopfuura ipapo.
8 Uchenjeri hunounza zivo, njere nokunzwisisa pamwe chete hwozvishandisa. Kutaura zvazviri, mamwe emashoko eBhaibheri epakuvamba anoshandurwa kuti “uchenjeri” sezvaari, anoreva “kushanda kunobudirira” kana kuti “uchenjeri hunoshanda.” Naizvozvo uchenjeri hwaJehovha hausi hwokungotaura. Hunoshandisika, uye hunoshanda. Achishandisa zivo yake yakawanda nenzwisiso yake yakadzama, Jehovha nguva dzose anoita zvisarudzo zvakanakisisa zvinobvira, achizviita nenzira yakanakisisa ingafungwa nezvayo. Ihwohwo ndihwo uchenjeri hwechokwadi! Jehovha anoratidza kuti mashoko aJesu ndeechokwadi okuti: “Uchenjeri hunoratidzwa kuti hwakarurama nemabasa ahwo.” (Mateu 11:19) Mabasa aJehovha munyika yose anopa uchapupu hune simba hwouchenjeri hwake.
Uchapupu Hwouchenjeri hwaMwari
9, 10. (a) Jehovha anoratidza uchenjeri hworudzii, uye akahuratidza sei? (b) Sero rinopa sei uchapupu hwouchenjeri hwaJehovha?
9 Wati wamboshamiswa noungwaru hweimwe mhizha inogadzira zvinhu zvakanaka zvinoshanda zvakanaka here? Ihwohwo uchenjeri hunoorora. (Eksodho 31:1-3) Jehovha pachake ndiye dura uye muridzi chaiye wouchenjeri hwakadaro. Mambo Dhavhidhi akati nezvaJehovha: “Ndichakuongai; nokuti ndakaitwa nomutoo unotyisa unoshamisa; mabasa enyu anoshamisa; mweya wangu unozviziva kwazvo.” (Pisarema 139:14) Zvechokwadi, sezvatinoramba tichidzidza nezvomuviri womunhu, tinowedzera kushamiswa nouchenjeri hwaJehovha.
10 Kungopa somuenzaniso: Wakatanga uri sero rimwe—sero rezai rakabva kuna amai vako, rakasangana nembeu yakabva kuna baba vako. Nenguva isipi, sero iroro rakatanga kukamuka kamuka. Iwe wakazobudapo, wakaumbwa nemasero matiririyoni 100. Madikidiki. Masero anenge 10 000 oukuru huri paavhareji angakwana mumusoro wepini. Asi, rimwe nerimwe chisikwa chakaoma kunzwisisa zvinotemesa musoro. Sero rakaoma kunzwisisa kupfuura muchina upi noupi kana kuti fekitari yakagadzirwa nevanhu. Masayendisiti anoti sero rakafanana neguta rine rusvingo—rine masuo okupinda nokubuda anorindwa, zvokufambisa, zvokukurukurirana nazvo, magwenya esimba, panogadzirwa zvinhu, zvokushandisa kurasa tsvina nokudzosazve zvinogona kushandiswa, zvokudzivirira, uye kunyange inenge hurumende nechepamwoyo paro. Uyezve, sero rinogona kubudisa rimwe rakafanana naro mumaawa mashomanana!
11, 12. (a) Chii chinoita kuti masero ari mumwana ari mudumbu ari kukura asiyane, uye izvi zvinowirirana sei nePisarema 139:16? (b) Munzirai umo uropi hwomunhu hunoratidza kuti ta“kaitwa nomutoo . . . unoshamisa”?
11 Chokwadi, haasiri masero ose akafanana. Sezvo masero omwana ari mudumbu anoramba achikamuka kamuka, anoita mabasa akasiyana chaizvo. Mamwe anova masero etsinga; mamwe emapfupa, tsandanyama, ropa, kana kuti masero emaziso. Kusiyanisa kwose ikoko kunorongwa kuchiiswa mu“raibhurari” yesero yemapurani, inonzi DNA. Sezvineiwo Dhavhidhi akafuridzirwa kuti kuna Jehovha: “Meso enyu akaona muviri wangu uchigere kukwaniswa, zvose zvakanga zvakanyorwa murugwaro rwenyu.”—Pisarema 139:16.
12 Dzimwe nhengo dzomuviri dzakaoma kunzwisisa zvikuru. Somuenzaniso, funga nezvouropi hwomunhu. Vamwe vakahuti chinhu chakaoma kunzwisisa kupfuura zvose chati chawanikwa munyika yose. Hune mabhiriyoni 100 emasero etsinga—akada kuwanda senyeredzi dziri muboka redu renyeredzi. Rimwe nerimwe remasero iwayo rinopatsanuka kuti ribatane nezviuru zvemamwe masero. Masayendisiti anoti uropi hwomunhu hungagona kuchengeta mashoko ose ari muraibhurari hombe kupfuura dzose munyika uye kuti hunenge huchiri kukwanisa kutora mamwe mashoko. Pasinei nemakumi emakore okudzidza nezvenhengo yomuviri iyi ya“kaitwa nomutoo . . . unoshamisa,” masayendisiti anobvuma kuti vangasambokwanisa kunzwisisa zvizere mashandiro ainoita.
13, 14. (a) Masvosve nezvimwe zvisikwa zvinoratidza sei kuti zvaka“chenjera kwazvo,” uye izvozvo zvinotidzidzisei pamusoro poMusiki wazvo? (b) Nei tingataura kuti zvisikwa zvakadai sedandemutande zvakaitwa ‘nouchenjeri’?
13 Zvisinei, vanhu vanongova muenzaniso mumwe wouchenjeri hwokusika hwaJehovha. Pisarema 104:24 rinoti: ‘Haiwa Jehovha, mabasa enyu mazhinji sei! Makaaita ose nouchenjeri; pasi pazere nepfuma yenyu.’ Uchenjeri hwaJehovha hunooneka zvakajeka muzvisikwa zvose zvakatipoteredza. Svosve, somuenzaniso, raka“chenjera kwazvo.” (Zvirevo 30:24) Zvechokwadi, mizinda yemasvosve yakarongwa kwazvo. Imwe mizinda yemasvosve inopfuya, inochengeta, uye inotarisira ichiwana zvokudya patumbuyu sotunowanikwa pamuriwo. Mamwe masvosve anoita sevarimi, achirima “zvirimwa.” Zvimwe zvisikwa zvakawanda zvakasikwa zvichikwanisa kuita zvinhu zvinoshamisa. Nhunzi inopidiguka pidiguka izvo ndege yazvino yakagadzirwa nomunhu isingagoni kutevedzera. Shiri dzinotama dzinofamba nokutarisa nyeredzi, kana kuti dzinoshandisa mepu iri mukati madzo. Vanodzidza nezvezvinhu zvipenyu vanopedza makore vachidzidza maitiro akaoma kunzwisisa ari muzvisikwa izvi. Saka Mwari Akazvigadzira anofanira kuva akachenjera zvikuru kwazvo!
14 Masayendisiti akadzidza zvakawanda muuchenjeri hwaJehovha hwokusika. Kunotova nebato ravanamakanika rinonzi biomimetics rinoedza kutevedzera magadzirirwo akaitwa zvisikwa. Somuenzaniso, ungave wakangotarisa dandemutande uchishamisika nokunaka kwaro. Asi makanika anoriona riri chigadzirwa chinoshamisa. Tambo dzacho dzinoratidzika sedzisina kusimba dzakasimba kupfuura simbi, dzakasimba kupfuura mafaibha okugadzirisa pasingapindi bara repfuti. Dzakasimba zvakadini? Fungidzira dandemutande rakudzwa kusvika pakukura soutava hunoshandiswa nechikepe chokuredzesa. Utava hwakadaro hungagona kubata ndege inotakura vanhu iri pakati pokubhururuka! Hungu, Jehovha akaita zvinhu zvose izvozvo “nenjere.”
Ndiani akaita kuti zvisikwa zvepasi zvive zvaka“chenjera kwazvo”?
Uchenjeri Hunopfuura Pasi Pano
15, 16. (a) Matenga azere nenyeredzi anopa uchapupu hwei pamusoro pouchenjeri hwaJehovha? (b) Nzvimbo yaJehovha soMukuru Mukuru Wehondo yengirozi dzakawanda kwazvo inopa uchapupu sei hwouchenjeri hwoMutungamiriri uyu?
15 Uchenjeri hwaJehovha hunooneka muzvinhu zvose zvaakasika. Nyeredzi dzizere mudenga, idzo dzinotaurwa nezvadzo chaizvo muChitsauko 5, hadzina kungoiswa pose pose muchadenga. Nemhaka youchenjeri hwe“mitemo yokudenga” yaJehovha, matenga akanyatsorongwa zvakanaka kuva mapoka enyeredzi, ayo anozobatana kuumba mapoka makuru enyeredzi. (Jobho 38:33) Hazvishamisi kuti Jehovha anotaura pamusoro pezvinhu zviri mudenga se“hondo”! (Isaya 40:26) Zvisinei, kune imwe hondo, inonyatsoratidza zvakajeka uchenjeri hwaJehovha kupfuura apa.
16 Sezvatinoona muChitsauko 4, Mwari ane zita rokuremekedza rokuti “Jehovha wehondo” nemhaka yenzvimbo yake soMukuru Mukuru Wehondo yeuto guru remazana emamiriyoni ezvisikwa zvomudzimu. Uhu uchapupu hwesimba raJehovha. Zvisinei, uchenjeri hwake hunobatanidzwa sei? Funga kuti: Jehovha naJesu havangoiti basa rokugara. (Johani 5:17) Zvinongoratidzawo kuti ngirozi dziri vashumiri voWokumusorosoro naidzowo dzinongogara dzichishanda. Uye yeuka, dzakakwirira kupfuura munhu, dzakachenjera zvikuru uye dzine simba kwazvo. (VaHebheru 1:7; 2:7) Asi, Jehovha anochengeta ngirozi dzose idzodzo dzakabatikana, dzichiita nomufaro basa rinogutsa—ku“ita zvaakataura” uye ku“ita zvinomufadza”—kwemabhiriyoni emakore. (Pisarema 103:20, 21) Uchenjeri hwoMutungamiriri uyu hunofanira kuva huchishamisa kwazvo!
Jehovha Ndiye “Akachenjera Oga”
17, 18. Nei Bhaibheri richiti Jehovha ndiye “akachenjera oga,” uye nei uchenjeri hwake huchifanira kutishamisa?
17 Nemhaka youchapupu hwakadaro, zvinoshamisa here kuti Bhaibheri rinoratidza kuti uchenjeri hwaJehovha hwakanakisisa? Somuenzaniso, rinotaura kuti Jehovha ndiye “akachenjera oga.” (VaRoma 16:27) Jehovha oga ndiye ane uchenjeri mupfungwa yakazara. Ndiye dura rouchenjeri hwose hwechokwadi. (Zvirevo 2:6) Ndicho chikonzero nei Jesu, kunyange zvazvo ari iye akachenjera kupfuura zvose pazvisikwa zvaMwari, asina kuvimba nouchenjeri hwake asi akataura sezvaairayirwa naBaba vake.—Johani 12:48-50.
18 Cherechedza kuti muapostora Pauro akaratidza sei kusiyana kwouchenjeri hwaJehovha: “Haiwa ukuru hwepfuma yaMwari nouchenjeri nezivo! Kutonga kwake hakunzvereki sei uye nzira dzake hadzirondeki sei!” (VaRoma 11:33) Nokutanga ndima iyi nemashoko okushamisika okuti “haiwa,” Pauro akaratidza manzwiro akadzama—panguva ino, kushamisika kwakadzama. Shoko rechiGiriki raakasarudza nokuda kwo“ukuru” rakada kufanana neshoko re“gomba rakadzika-dzika.” Nokudaro, mashoko ake anobudisa mufananidzo wakajeka mupfungwa. Patinofunga nezvouchenjeri hwaJehovha, zvinoita sokuti tiri kutarisa mugomba risina muganhu, kana kuti risina pasi, rinongova zienda nakuenda, makadzika, makakura zvokuti hatizombosviki pakuziva kuti makakura sei, ndoda kutozohutevedza kana kuti kuziva pahunogumira zvizere. (Pisarema 92:5) Iyoyo haisi pfungwa inoninipisa here?
19, 20. (a) Nei gondo riri mufananidzo wakakodzera wouchenjeri hwaMwari? (b) Jehovha akaratidza sei kukwanisa kwake kuona zviri munguva yemberi?
19 Jehovha ndiye “akachenjera oga” mune imwe pfungwa: Iye bedzi ndiye anogona kuona zviri munguva yemberi. Yeuka, Jehovha anoshandisa gondo rinogona kuona zviri kure kuratidza uchenjeri hwake. Gondo ringarema makirogiramu mashanu chete, asi maziso aro akakura kupfuura omunhu mukuru. Gondo rinoona zvinoshamisa, zvokuti shiri yacho inoona nyama yainoda kubata iri mazana emamita mudenga, pamwe kunyange riri kure nemakiromita! Jehovha pachake akamboti nezvegondo: “Meso aro anozviona zviri kure.” (Jobho 39:29) Mupfungwa yakafanana neiyi, Jehovha anogona kutarira achi“ona zviri kure” munguva—nguva yemberi!
20 Bhaibheri rakazara nouchapupu hwokuti izvi ndezvechokwadi. Rine mazana ouprofita, kana kuti nhau dzakaitika dzakanyorwa dzisati dzaitika. Migumisiro yehondo, kumuka nokuwa kwemasimba enyika, uye kunyange unyanzvi hwehondo hwevakuru vemauto zvose zvakafanotaurwa muBhaibheri —mune zvimwe zviitiko, pachine mazana emakore.—Isaya 44:25–45:4; Dhanieri 8:2-8, 20-22.
21, 22. (a) Nei pasina zvikonzero zvokuguma tati Jehovha akafanoona zvisarudzo zvose zvauchaita muupenyu? Ipa muenzaniso. (b) Tinoziva sei kuti uchenjeri hwaJehovha hahusi husina ushamwari kana kuti husina kunzwira vamwe?
21 Zvisinei, izvi zvinoreva here kuti Mwari akatofanoona zvisarudzo zvauchaita muupenyu? Vamwe vanoparidza dzidziso yokufanorongerwa vanoomerera pakuti ndizvozvo. Zvisinei, pfungwa yakadaro inotoderedza uchenjeri hwaJehovha, nokuti inoreva kuti haagoni kudzora mano ake okuona zviri munguva yemberi. Kungopa somuenzaniso: Kudai waiva nenzwi rokuimba rakanakisisa, waingozofanira kugara uchiimba nguva dzose here pasina zvimwe zvaungaita? Pfungwa yacho haina njere! Saizvozvo, Jehovha anokwanisa kufanoziva zviri munguva yemberi, asi haashandisi mano acho nguva dzose. Kuita kudaro kwaizokanganisa rusununguko rwedu rwokuzvisarudzira, chipo chinokosha icho Jehovha asingazombotitoreri.—Dheuteronomio 30:19, 20.
22 Zvakatoipa zvikuru, pfungwa yokufanorongerwa inoratidza kuti uchenjeri hwaJehovha hauna ushamwari, hauna tsitsi, kana kuti kunzwira vamwe. Asi ichi hachisi chokwadi! Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jehovha “ane mwoyo wakangwara.” (Jobho 9:4) Kwete kuti ane mwoyo chaiwo, asi Bhaibheri rinowanzoshandisa shoko iroro kuratidza munhu womukati, izvo zvinobatanidza mafungiro nemanzwiro, akadai sorudo. Naizvozvo uchenjeri hwaJehovha, kufanana nohumwe unhu hwake, hunodzorwawo norudo.—1 Johani 4:8.
23. Ukuru hwouchenjeri hwaJehovha hunofanira kutiita kuti tinzwe kuda kuitei?
23 Sezvatingatarisira, uchenjeri hwaJehovha hwakavimbika zvakakwana. Hwakakwirira zvikuru kupfuura uchenjeri hwedu zvokuti Shoko raMwari norudo rinotikurudzira kuti: “Vimba naJehovha nomwoyo wako wose, urege kusendama panjere dzako. Umutende panzira dzako dzose, agoruramisa makwara ako ose.” (Zvirevo 3:5, 6) Zvino ngatimbochera muuchenjeri hwaJehovha kuti tigoswedera pedyo naMwari wedu wouchenjeri hwose.
Jobho 28:11-28 Uchenjeri hwaMwari hunokosha zvakadini, uye mugumisiro wei wakanaka ungauya nokufungisisa nhau yacho?
Pisarema 104:1-25 Uchenjeri hwaJehovha hunooneka sei mune zvaakasika, uye izvozvo zvinokuita unzwe sei?
Zvirevo 3:19-26 Kana tikafungisisa uchenjeri hwaJehovha tohushandisa, izvi zvingaguma nei paupenyu hwedu hwezuva nezuva?
Dhanieri 2:19-28 Nei Jehovha achinzi Muzivisi wezvakavanzika, uye tinofanira kuita sei nouchenjeri hwouprofita huri muShoko rake?